ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: May 2009
ဒီနေ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Speakers' corner မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံအချို့ပါ။ ကျန်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကြွေးကြော်သံဗီဒီယိုကို ပို့စ်အဆုံးပိတ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ခ်တွေမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲကို လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံတွေကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, May 31, 2009
Labels: political activity Comments: (50)
“Demonstration in Phnom Penh, Cambodia ...Part(2)”
ကမ္ဘောဒီးယားရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြပွဲကနေ နောက်ထပ် ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့အတူ ဗီဒီယို လင့်ခ်ကိုလည်း Part (2) အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ယုံကြည်ချက်အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး ပေးဆပ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အသိအမှတ်ပြုလျက်.....။
ဆန္ဒပြပွဲ ဗီဒီယိုများကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, May 27, 2009
မြန်မာ့အရေးမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူများအပေါ် စင်္ကာပူအစိုးရက နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးမပေးတဲ့နောက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ (အိုဘီပီ)ဟာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (အင်န်ဂျီအို)များနှင့်အတူ ဒီကနေ့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွန်းပင်မြို့တော် မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အခုလို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားရောက် အိုဘီပီ အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ မြန်မာ့အရေးအတွက် ထက်သန်တက်ကြွမှုကို ဒီပို့စ်နဲ့ ချီးကျူးမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး မုချအောင်ရမည်။
Labels: political activity Comments: (12)
စင်္ကာပူမှာ အခမဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ အာဘော် တူဒေးသတင်းစာမှာ ဒီနေ့ မမှားသင့်တဲ့ အမှားတခုပါလာတယ်။ သတင်းက အေပီကနေ တဆင့်ဝယ်တာဆိုတော့ အေပီကပဲ မှားသလား၊ တူဒေးလက်ထဲရောက်မှ မှားသလားမသိ။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းတပုဒ်ကို ဖော်ပြရာမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းပုံကို ဖော်ပြပြီး ဓါတ်ပုံအောက်က ပုံအညွှန်းစာမှာ “သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့ထဲက ရှေ့နေတယောက်လည်းဖြစ်တယ်” လို့ မှားယွင်းဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်က ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို တယောက်တည်းလို့ ထင်ပုံရတယ်။ အယ်ဒီတာမင်းများ ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်ပေစွ။ မှားမှ မှားရက်ပလေ။
(အကြီးချဲ့မြင်ရအောင် အောက်ကပုံပေါ်မှာ ကလစ်ခေါက်ပါ။ မူရင်းသတင်းကိုတော့ ဒီမှာ သွားဖတ်ပါ။) Updated: အခုနေ့လည်ပိုင်းမှာ အွန်လိုင်းဗားရှင်းမှာ တစုံတယောက်က အမှားကိုထောက်ပြတဲ့အတွက် ပြန်ပြင်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, May 26, 2009
Labels: in the news Comments: (8)
(ရှေ့က ပို့စ်တခုမှာ အမည်မသိတဦး လာရောက် မှတ်ချက်ပေးသွားတာကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ စာပိုဒ်ခွဲပေးလိုက်တာက လွဲလို့ သတ်ပုံသတ်ညွှန်းကအစ သူ့မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။)
ဒီနေ့ညနေတွေ့ဆုံခြင်းဟာ...ကဗာတ၀ှမ်းမှာရှိကြတဲ့...ဗမာအမျိုးသားတွေထဲက Singapore ရှိ ဗမာအမျိုးသားတွေရဲ့....မတရားမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့...တရားမျှတမှုကိုသာ...အလိုရှိတာကို...ငြိမ်းချမ်းစွာ...ကဗာတ၀ှမ်းကို...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆန်ဒပြုကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်...
အားလုံးဟာ..ကိုယ့်အရေးနဲ့ကိုယ်...လုံးပန်းနေရတာဖြစ်ကြလို့...မလာရောက်နိုင်သူများစွာရှိနေနိုင်ပေမဲ့..လာရောက်ကြမဲ့ ဗမာအမျိုးသားတွေ လည်းရှိနေကြပါတယ်...လာရောက်သည်ဖြစ်စေ...မရောက်ရှိနိုင်သည်ဖြစ်စေ..ယခုအချိန်သည်...SPDC ၏ မတရားမှုကို..အထင်အရှားတွေ့မြင်နေရသည်ကိုယုံမှား..သံသယဖြစ်စရာမလိုတော့ပါ...ဗမာပြည်သူများ၏နှလုံးမသာယာသော..အချိန်များဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲကိုကြည့်လျှင်ဗမာ့အရေးအတွက်ရင်လေးကြသော...မတရားမှုကိုအားမပေးတတ်သော...တိုင်းပြည်၏တာဝန်ကိုယူရမည်ဟုနားလည်ကြသော...အမျိုးကောင်းသားတို့သည်...မည်သည့်ဆင်ခြေမျှမပေး...မည်သူ့ပရောဂမှ..မပါပဲ...အလိုအလျှောက်ဗမာအရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့ရမည်။အောင်မြင်မှုရ၏၊မရ၏ကား...အများ၏အဆုံးအဖြတ်..မတရားခြင်းကို နိဂုံးချုပ်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကား...တို့လုပ်ရမည့်တရားဟုသာရည်သန်လျှက်...ထိုသူတို့သည်..လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Singapore အနေအထားအရ...ဆန်ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲများကို...အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်...ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ...တစ်ဖက်တွင်လည်း...ကျွန်တော်တို့မှာ...အခြားတိုင်းပြည်တွင်လာရောက်..လုပ်ကိုင်...အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေသူများဖြစ်ရာ..ထိုတိုင်းပြည်တို့၏..လုပ်ထုံးလုပ်နည်း...တည်ငြိမ်မှုကိုမထိပါးရေး...အစရှိသည်တို့ကိုလည်း အမြဲထည့်စဉ်းစားရမည်သာဖြစ်သည်၊ Singapore မှမဟုတ်..မြန်မာပြည်မှတပါး...အခြားသောတိုင်းတစ်ပါးသို့ ရောက်ရှိနေကြသော...ဗမာအမျိုးသားများ ဂရုပြုရမည်သာတည်း။ (အုပ်စိုးသူမင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းသာလျှင်ယုတ်ညံ့သည်...တကယ့်ဗမာအမျိုးသားမျုား၏စိတ်တွင်ကားမိမိကြောင့်သူတစ်ပါးတို့၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုထိခိုက်ရန်၊လုပ်ဆောင်ရန်စိုးစဉ်းမျှမရှိပေ...)(ပြည်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ယူမှုမှာလည်းမြန်မာပြည်နီးပါး...အကဲဆတ်လှပါသည်ကိုလည်းမှန်းဆနိုင်ပါသည်။)
မည်သို့ဆိုစေကာမူ.....ယနေ့Singapore မှ ဗမာ့အသံများသည်... ကဗာပေါ်မှ...ဗမာတို့၏ မတရားမှုများကိုမနှစ်မြို့သောအသံများစွာကို ကိုယ်စားပြုနေလျှက်ရှိနေပေပြီ။
ကဗာပေါ်ရှိ မြင့်မြတ်သော၊အမြင်ကျယ်သောအမျိုးသားတိုင်းတွင် ယေဘူယျတာဝန်(၂) ရပ်ရှိကြပေသည်။တာဝန်တစ်ခုမှာ...မိမိ မိသားစု၊အိမ်ထောင်မှု...လူမှုရေးအစရှိသောတာဝန်များဖြစ်ကာ၊အခြားတာဝန်မှာ... မိမိ၏နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်သူများအတွက်ဆိုလျှင်... စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပယ်ရှားရေးနှင့်၊ လူထုကိုကိုယ်စားပြုကာ၊ လူတိုင်းသာတူညီမျှရှိစေသည့်၊လူမှုဘ၀များကိုစိုးရိမ်ကြောင့်ကြကင်းစွာ အာမခံနိုင်သည့်စနစ်ကို တတ်နိုင်သမျှအချိန်တိုအတွင်း ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ကြရန်သည်.. ယနေ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေသော...ဗမာပြည်သူများအားလုံး၏ နိုင်ငံ့တာဝန်ဖြစ်သည်။
( Singapore ဆိုပါမူ..ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်သည့်၊ ရှိပြီးသားတိုးတက်မှုများကို တည်တံ့ခိုင်မြဲနေအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်မှာ Singapore သားအားလုံး၏ နိုင်ငံ့ တာဝန်ဖြစ်ပေမည်။)လူတစ်ဦးစီ၏နိုင်ငံ့တာဝန်ကို.ထမ်းရွက်ရမည်ဟုနားလည်ခြင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေခြင်းအစရှိသည်တို့မှာ...သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လူထုအပေါ်မှန်ကန်စွာဦးဆောင်မှု၊ အသိပေးမှု...အစရှိသည် များနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏...ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိမှု...အစရှိသည့် အခြေခံများတွင်မူတည်လျှက်ရှိသည်။ ယနေ့ဗမာပြည်တွင်...စစ်အစိုးရ၏ အဆောက်အဦ(Institution) များမှလွဲလျှင်...အခြားသောအဆောက်အဦများမှာ.. (ဆိုရလျှင်... တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်မှစကာ...ကျမ်းမာရေး... ပညာရေး.... ကုန်သွယ်ရေး.... မြုနီစပယ်စနစ်အဆုံး...) ချိနဲ့နေရပြီဖြစ်ရာ.... ဗမာပြည်သားများကို... သင့်မှာနိုင်ငံရေးတာဝန်ရှိပါသည်ဟုပြောမိလျှင်... နားလည်နိုင်မည်လားဟုသင်ထင်ပါသလား...အများစုနားလည်လက်ခံမည်မထင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်းကာ ပြောပြကြရန်သာရှိပေသည်။ ထိုတာဝန်သည်.. ကျွန်တော်တို့တွင်တကယ်ရှိနေပါသည်။ သင်သဘောပေါက်သည်ဖြစ်စေတာဝန်ယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သဘောမပေါက်သည်ဖြစ်စေတာဝန်မယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုတာဝန်ကိုထမ်းရန် သင်တို့ ကျွန်တော်တို့တွင်တကယ်ရှိနေပါပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့ ကျွန်တော်တို့သည် ဗမာပြည်တွင်မွေးဖွားခဲ့သော ဗမာပြည်သားများ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သင်သည် ကျောင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အလုပ်သမားလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ စစ်အစိုးရကိုစိတ်နာနေသူလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ စစ်အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဘ၀အတွက်စိတ်အေးနေရသူလည်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊သို့မဟုတ်စစ်အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များကိုမုန်းတီးသောလည်းမိမိဆွေမျိုးသားချင်းစစ်အစိုးရဆက်စပ်သူများဖြစ်နေသူလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ မည်သို့သူပင်ဖြစ်စေ...ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ...ဗမာပြည်သားများသာဖြစ်ရာ....အားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံ့တာဝန်ကို....နိုင်ငံ့တာဝန်ကိုတိုးတက်ရန်...အားထုတ်ရမည်သာဖြစ်သည်။ သင်တ်ို့၏ မိသားစုတာဝန်များကိုလည်း မလစ်ဟင်းစေသလို၊တိုင်းပြည်၏တာဝန်များကိုလည်းမြက်ခြေမပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်...သင်တို့၏နိုင်ငံ့အပေါ်တာဝန်ယူမှုနှင့်အမျိုးမြင့်မြတ်ခြင်းကိုပြသကြပါ...
ယခုလောလောဆယ် Singapore ရှိမြန်မာများ အနေဖြင့်... လုပ်ဆောင်နိုင်သည်များအနက် တချို့မှာ
၁) အလှူငွေ - နီးစပ်ရာကိုစုံစမ်းကြည့်ပါ၊ စစ်မှန်သောနိုင်ငံ့အရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေသောရန်ပုံငွေစုစည်းရေးအဖွဲ့များရှိနေပါသည်။ လစဉ်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ရှေ့တန်းထွက်ကာလုပ်ဆောင်နေ သူတို့၏ (NLD ++) အားတက်မှုများ ကို အရှိန်မြင့်ပါစေလေ။
၂) မိမိတို့နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက် လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များ၊ သတင်းအချက်များကိုကို တင်ပြပါ။
Posted by ကိုပေါ on Monday, May 25, 2009
(ပုံကြီးချဲ့မြင်နိုင်ရန် ပုံပေါ်တွင် ကလစ်ခေါက်ပါ။)
အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် MARUAH အဖွဲ့နဲ့ အတူ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရ ဗီဒီယိုလေးကို ဒီပို့စ်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 22, 2009
Labels: in the news Comments: (67)
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဖိတ်ကြားစာ (စင်္ကာပူ)”
Speakers' Corner တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများ ဦးစီးပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဖိတ်ကြားစာမူရင်း....
“In Unity for the Liberty of Daw Aung San Suu Kyi at Speakers’ Corner”
Theme: yellow colour; vigil with speeches; candlelight; releasing some yellow balloons with her portrait asasymbol of asking for her to be set free
Re: In Unity for the Liberty – Daw Aung San Suu Kyi’s Freedom
We, members of MARUAH (Singapore Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism), would like to invite you, personally, and your organization to be part ofacivil society movement to call for the freedom of Daw Aung San Suu Kyi.
Daw Aung San Suu Kyi, who won the democratically-held elections in 1990, has been under house arrest for almost two decades. On 18th May 2009, she was charged with breaching the terms of her house arrest and stood trial. She has borne her trials with dignity. Yet they continue unabated. The world has honoured her withaNobel Peace Prize and lobbied tirelessly for her freedom but there isagrowing helplessness towards the situation as the Myanmar junta continues to keep her in detention without trial.
We find the situation untenable. It will beagrave injustice if we all were to stand by and let this courageous citizen spend all her days asaprisoner. She is due for release at the end of May.
Many among us know that it will not happen. We need to show ASEAN solidarity at the civil society level and act together to ask for her freedom.
Can we then come together throughout ASEAN on the same day at the same time to demand for her freedom? Can we show solidarity by wearing some yellow in our clothing, holdacandlelight vigil and let off as many yellow-coloured balloons with her portrait, into the skies?
Civil society actors in certain countries may, of course, prefer to address supporting Daw Aung Sung Suu Kyi in their own unique way. But we hope that you will kindly agree to the above as some minimum.
I encloseaflyer for local use with space for NGOs to add their logo and adapt for their individual country use. But at the ASEAN level we are happy to coordinate this effort with the lead NGO in each country so that we can know how many organizations are committed to this project.
The date we have chosen is 31st May 2009. The time is6pm (Singapore);7pm (Bangkok); 5pm (Jakarta).
Please let us know if you would like to be part of this initiative and will be the coordinating NGO for this effort in your country to carry out the solidarity movement in your country.
There is no leading organization in this, We are acting collectively and want the same thing for Daw Aung San Suu Kyi – freedom and justice. We are justatrigger and we hope it will takealife of its own.
In unity for the Liberty of Daw Aung Sung Suu Kyi
c/o MARUAH(Singapore)c/o Tenaganita( Malaysia)
1. Only Singaporeans and Permanent Residents can participate in the demonstration in the Speakers Corner.
2. Observers – those who are unsure of their immigration status or are not citizens or PRs - please do know that by law you ought not to carry placards, banners, posters or photographs of Daw Aung San Suu Kyi or any Burmese opposition leaders.
3. Singaporeans and Permanent Residents who are taking part in the demonstration, please comply with the following conditions:
a. Please do not recite anything that is religious or may cause feelings of enmity, hatred, ill-will or hostility between different racial or religious groups. Please remember this isapeaceful demonstration. We are showing our solidarity with the people in ASEAN in asking for the release of Daw Aung Sung Suu kyi and also our sadness at the state of democracy in Myanmar(Burma)
b. We do not encourage placards or banners except for Daw Aung San Suu Kyi’s photograph, which we strongly encourage. If there are placards or banners they must not contain violent, lewd or obscene material.
A reminder: The organizers can request members of the public to leave the area demarcated for the demonstration should their actions be considered as flouting the terms and conditions of licence granted by the National Parks of Singapore for this demonstration or any other laws regulating public demonstrations in Singapore.
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, May 20, 2009
Labels:ိdistribution Comments: (14)
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ ရတနာပုံသတင်းစာက အယ်ဒီတာမင်းတွေကို ခေါ်ပြီး ဟောသလို ပြောသတဲ့။
“ငါမကောင်းရင် ငါ့ကိုရေး။ ငါ့မိဖုယား မကောင်းလျှင် ငါ့မိဖုယားအကြောင်းရေး။ မောင်မင်းတို့ ဘေးမသင့်စေရ”……….တဲ့။ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့် ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်။
တော်ပါသေးရဲ့။ ဒီဖက်ခေတ်မှာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တော်မူသော ကြပ်ပြေးက အဘတယောက် မင်းတုန်းမင်းကို အားကျပြီး သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်အသီးသီးက သတင်းထောက်တွေကို အထက်ပါအတိုင်း အမှာတော် မခြွေခဲ့လို့။
နို့မဟုတ်ရင် တနေ့တနေ့ သတင်းစာထဲမှာ အဘ မကောင်းကြောင်းတွေ၊ ကြိုင်ကြိုင့် မကောင်းကြောင်းတွေ၊ အဘ သားသမီး မကောင်းကြောင်းတွေချည်းပဲ ရေးရလွန်းလို့ တခြားသတင်းတောင် ထည့်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်။ သတင်းစာတွေလည်း တစောင်ဆိုရင် လေရူးသုန်သုန်ဝတ္ထုလောက် အထူကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သတင်းစာ ပစ်တဲ့လူတွေ လက်မောင်းအောင့်ဖို့သာ ပြင်ပေရော့။ လူတွေလည်း သတင်းစာအဟောင်းကို ပဲကြီးလှော်နဲ့ လဲစားရလွန်းလို့ တဘူဘူနဲ့ လေထု ညစ်ညမ်းကိန်းရှိတယ်။
အင်း….. အဘ.. အဘ….၊ အဘ ကယ်ပေလို့သာပေါ့။
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့ထဲသို့ရောက်ခိုက် မြို့ထဲတိုက်ခန်းတခုတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ဦးရှံစားထံသို့ အလည်ဝင်ရန် စိတ်ကူးရလေသည်။ သို့နှင့် အုတ်လှေကားအတိုင်းတက်သွားပြီး ဒုတိယထပ်ရှိ ဦးရှံစား၏ တိုက်ခန်းရှေ့တွင် ရပ်လျက် အခန်းတံခါးကို လက်ဖြင့် အသာခေါက်လိုက်သော် အထဲမှ…..
“ကိုဒိန်းဒေါင်လား၊ တံခါးဖွင့်ထားတယ်ဗျ။ ၀င်ခဲ့လေဗျာ”
ကျွန်ုပ်လည်း အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီး ၀င်သွားလျှင် အခန်းတွင်း၌ ပက်လက်ကုလားထိုင်တလုံးဖြင့် သတင်းစာတစောင်ကို ဖတ်ရှုလျက်ရှိသော မိတ်ဆွေကြီး ဦးရှံစားကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ကျွန်ုပ်လည်း အတန်ငယ် အံ့အားသင့်စွာဖြင့်…..
ထိုအခါ ဦးရှံစားသည် ငါးသလောက်ပြုံး တချက်ပြုံးလိုက်ပြီး…..
“မခက်ပါဘူးဗျာ။ စောစောက ကျုပ် ၀ရန်တာမှာထွက်ပြီး လမ်းမပေါ်ကို ကြည့်နေတုန်း ခင်ဗျား လမ်းလျှောက်လာတာကို မြင်ရတယ်။ ကျုပ်တိုက်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါ လှေကားဆီကို ချိုးကွေ့သွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့ ခင်ဗျားကျုပ်ဆီလာတာဆိုတာ သေချာသွားပြီ။ ဒါကြောင့် တံခါးကို အထဲကနေ ဂျက်ဖွင့်ပြီး စောင့်နေတာပေါ့”
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင် ဂိန်ကနဲ မြည်သွားပြီး ကျွန်ုပ်၏ အတွေးခေါင်ပုံကို နောင်တရသွားလေသည်။ သို့နှင့်…..
ဦးရှံစားသည် စကားပြောရင်းက ပါးစပ်မှ ဆေးတံကို အသာချွတ်လိုက်ကာ ဆေးပြာများကို အနီးရှိ ပြာခွက်ထဲသို့ တဒေါက်ဒေါက် ခေါက်ချလိုက်ပြီး ဆေးတဆုံအသစ်ဖွာရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိလေသည်။
“ဟုတ်တယ်ဗျ။ တနိုင်ငံလုံးလည်း ဒီအကြောင်းပဲ ပြောနေကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းသော ရေကူးမှုကြီးလို့ ပြောရအောင် ဒီအမှုက ဒီလောက်ရိုးရှင်းနေတာပဲဗျာ။ ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကို ရေကူးဝင်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ညအိပ်ပြီး နောက်တော့ ရေကူးပြန်ထွက်အလာမှာ သက်ဆိုင်ရာတွေက ဖမ်းမိတာမို့လား။ ဘာများထူးဆန်းတာပါလို့လဲ”
ဦးရှံစားသည် ဆေးတံကို မီးညှိရင်းမှ…..
(ဦးရှံစား) “ဒီလိုဗျ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တ၀ိုက်က အင်းလျားကန် ဆိုတာ လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက် တင်းကြမ်းပြည့် ချထားတာတဲ့ဗျ။ အဲသည်နေရာ တ၀ိုက်မှာ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေလည်း နေထိုင်ကြတယ်ဆိုပဲ။ ဒီတော့ အင်းလျားကန်ထဲက ငါးတွေတောင်မှ အဲသည်ဖက်ခြမ်းကို ရေကူးချင်ရင် မှတ်ပုံတင်ပြပြီးမှ ကူးခွင့်ရှိတယ်လို့ တချို့က ရယ်စရာအဖြစ် ပြောကြတယ်။ အဲသည်လို နေရာမျိုးမှာ ဂျွန်ဝီလျံယက်တော ရေသန့်ဘူးကြီး တကားကားနဲ့ ကူးတာကို ဘယ်သူမှ မမြင်လိုက်ဘူးဆိုတာက ထူးဆန်းနေတော့တာပေါ့ဗျ။ လုံခြုံရေးတွေက မျက်စိမှိတ်နေလိုက်မှ ကူးလို့ ဖြစ်မှာမျိုးကိုး”
(ဦးရှံစား) “နောက်တခုက ၀ီလျံယက်တောရဲ့ ဇနီးက သတင်းစာတွေကို ပြောပုံအရ ၀ီလျံယက်တောဟာ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိတယ်။ ဆီးချိုလည်းရှိတယ်တဲ့။ သည်ပုံအတိုင်းဆို သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ အင်းလျားကန်ကို ကူးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် လမ်းတ၀က်မှာကတည်းက ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်သွားနိုင်တယ်ဗျ။ ကျုပ်တို့လူက ကြောက်လည်း ကြောက်တတ်သတဲ့။ အခုကျတော့ သူလုပ်ပုံက 007 (ဂျိမ်းစ်ဘွန်း)လို စွန့်စားခန်းကို လုပ်သွားတာမဟုတ်လား။”
(ကျွန်ုပ်) “ဒါဆိုရင် ဂျွန်ဝီလံယက်တောဟာ အင်းလျားကန်ထဲကတဆင့် ရေကူးသွားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့”
ထိုအခါ ဦးရှံစားသည် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောလိုက်ပြီး……
“ကျုပ်တော့ မထင်ဘူး... ကိုဒိန်းဒေါင်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျုပ်တောင် ကဗျာတပုဒ် အပြောင်အပျက် စပ်ထားပါသေးတယ်ဗျ”
ဟုဆိုကာ ကဗျာတပုဒ်ကို အောက်ပါအတိုင်း သံနေသံထားဖြင့် ရွတ်ပြလေသည်။
(ဦးရှံစား) “နောက်ဖေးပေါက်က မ၀င်ရင် အိမ်ရှေ့က ၀င်ဖို့ပဲ ရှိတော့တာပေါ့ဗျာ။ အခုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ ၀ီလျံယက်တောဟာ အစိုးရသတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြသလို ဟိုတယ်ကနေ အင်းလျားကန်ကိုသွား၊ အင်းလျားကန်က ရေကူးပြီး ၀င်တာမဟုတ်။ သတင်းစာထဲမှာ ယက်တောပုံကို မြင်တော့ တက္ကစီသမားတယောက်က မှတ်မိသွားပြီး ဒီလူကို သူလေဆိပ်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့ကိုတိုက်ရိုက် သူ့တက္ကစီနဲ့ ခေါ်သွားပေးရတယ်။ ဟိုရောက်တော့ လုံခြုံရေးအစောင့်တွေကို ယက်တောက ကဒ်အနီတခုပြလိုက်တော့ အစောင့်တွေက အိမ်ထဲကို ခေါ်သွားတာ မြင်လိုက်ရတယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ။ ဒီသတင်းသာ မှန်မယ်ဆိုရင် ဒီအမှုဟာ အာဏာပိုင်တွေဖက်ကနေ အတင်းအကြပ် လုပ်ဇာတ်ခင်းတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေတာပေါ့ဗျာ။”
(ကျွန်ုပ်) “ဒါပေမယ့် တက္ကစီသမားကို သက်သေခေါ်နိုင်ဖို့တော့ လွယ်မယ်မထင်ဘူးဗျို့။ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ ခြေနဲ့ရေးထားတာကို လက်နဲ့ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားသူမှန်သမျှကို ချမ်းသာပေးမယ်မထင်ဘူး”
(ဦးရှံစား) “သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ဒီအမှုမှာ ဘယ်သူဟာ တရားခံလဲဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေပါတယ်ဗျ။ ဒီအမှုမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြား ဖြစ်ရပ်တော်တော်များများမှာ သူခိုးက လူလူဟစ်နေတာတွေကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
(ကျွန်ုပ်) “အလို…. တခြားဖြစ်ရပ်တွေ ရှိသေးတယ် ဟုတ်စ၊ လင်းစမ်းပါဦးဗျာ”
(ဦးရှံစား) “ကိုဒိန်းဒေါင်တယောက်မလဲ တယ်လဲ အမှတ်သညာ နည်းသကိုးဗျာ။ ဒီလိုဗျာ…. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မဲအပြတ်အသတ်နဲ့အနိုင်ရတော့ နအဖ အစိုးရဟာ သူ့ကတိအတိုင်း အာဏာလွှဲမပေးပဲနဲ့ လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သူတွေကို ဟောသည်လို စွတ်စွဲသဗျ။
(ဦးရှံစား) “နောက်တခါ မတ္တရာအမတ်ဦးသန်းလွင်ကို ကြံဖွံ့အဖွဲ့သားတယောက်က သံလက်သီးနဲ့ မျက်နှာကို ထိုးတဲ့အမှုမှာ ထိုးတဲ့လူကို အရေးမယူပဲ အထိုးခံရတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ကို ထောင်ထဲထည့်တယ်လေဗျာ”
(ဦးရှံစား) “ဒါ… ဘာဟုတ်သေးလဲဗျ။ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲမှာလည်း လူသတ်တရားခံတွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေက လွတ်နေပြီး အရိုက်ခံရတဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုသာ ထောင်ဒဏ်တွေ၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်တွေ မတရားချမှတ်ထားတာမို့လား”
(ဦးရှံစား) “ဒါတွင် ဘယ်ကမလဲဗျာ။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချ၊ အတင်းလူဝတ်လဲခိုင်းပြီး ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်သူတွေကိုတော့ သူကောင်းပြုထားသဗျ”
(ဦးရှံစား) “နောက်တခါ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တော့ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ကိုဇာဂနာတို့ကို ထောင်ထဲထည့်ပြီး ကူညီလှူဒါန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကြားကဖြတ်ခုတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ လွှတ်ပေးထားတာလည်း ရှိသေးသဗျ”
(ဦးရှံစား) “ဟုတ်တယ်ဗျိုး။ အခုနောက်ဆုံး ဂျွန်ဝီလျံယက်တောအမှုမှာလည်း အပြစ်မရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မတရားသဖြင့် အမှုဆင်ပြီး ဒုက္ခပေးဦးမယ်လို့ ယူဆရတယ်။”
(ဦးရှံစား) “အင်း… ကျုပ်ရဲ့ အလုပ်က ဒီခေတ်ကြီးနဲ့ မသင့်တော်လို့ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါပြီ။ အခုခေတ်ကြီးမှာ အပြစ်မရှိသူက ထောင်ကျပြီး တကယ့်တရားခံတွေက လွတ်နေတာမျိုးဆိုတော့ ကျုပ်က အမှုမှန်ဖော်ပေးရင် အပြစ်မရှိသူတွေ နေရင်းထိုင်ရင်း ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာ စိုးရသဗျ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်ပညာကို ထုတ်မပြ၀ံ့တော့ပဲ အိမ်ထဲမှာ ဘာမှမသိသလို ငြိမ်နေရတာပေါ့ဗျာ။
(ကျွန်ုပ်) “အေးဗျာ။ ခေတ်ကြီးက မကောင်းတော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ့။ ကဲ…. နေတောင် အတော်စောင်းနေမှပဲ။ ပြန်တော့မယ်ဗျို့။ မဟုတ်ရင် ကျုပ်တို့ကိုပါ ဧည့်စာရင်းမတိုင်မှုနဲ့ ဆွဲထည့်နေမှ ထောင်ထဲမှာ ၀ီလျံယက်တောနဲ့ ဆုံနေရဦးမယ်။ သွားပြီဗျိုး။”
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ဦးရှံစားကို နှုတ်ဆက်လျက် အင်းစိန်လော်ကယ်ကို ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ် တိုးစီးကာ ပြန်ခဲ့သည်။ လမ်းတွင် လမ်းဘေး၌ ထောင်ထားသော ဆိုင်းပုဒ်ကြီးတခုကို ဖတ်လိုက်ရသောအခါ ကျွန်ုပ်၏ သွေးများ ဆူဝေသွားလေတော့သည်။
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။.............။ နအဖရဲ့လုပ်ကြံဇတ်လမ်းကို တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦးက စတင် ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုပါပြီ။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, May 17, 2009
Labels: short story Comments: (31)
Labels: in the news Comments: (5)
ဒီနေ့အဖို့တော့ မဇ္ဇျိမ အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အန်ကယ်လ် ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းကို ညွှန်းလိုပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေရော၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပါ မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်တဲ့ အင်တာဗျူးတခုဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 15, 2009
Labels: sharing Comments: (7)
Labels: in the news Comments: (43)
Labels: in the news Comments: (27)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ကို အင်းလျားကန်ထဲက တဆင့် ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်အထွက်မှာ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရရှာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့်ဆီကို အီးမေးလ် နှစ်စောင်တိတိ ရောက်လာပါတယ်။
ပထမတစောင်မှာ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းကလေးပါရှိပြီး နောက်တစောင်မှာတော့ ဂူဂယ်လ်အပ်သ်က မြေပုံလေးတခုပါရှိပါတယ်။ အဲသည်မြေပုံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်တည်နေရာနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖမ်းမိတဲ့နေရာကို အမှတ်အသားကလေးတွေနဲ့ ပြသထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (နှစ်ပုံစလုံးကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။)
အဲသည်နှစ်နေရာရဲ့ အကွာအဝေးကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဆိုတာ တခြားမဟုတ်နိုင်.... ပီကင်းအိုလံပစ် ရေကူးအားကစားမှာ ရွှေတံဆိပ်တွေ တလှေကြီး ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ Michael Phelps များ ဖြစ်လေမလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ (ပုံကို မူရင်းအရွယ်အစားအတိုင်း မြင်လိုပါက ပုံပေါ်တွင် ကလစ်ခေါက်ပါ။)
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 8, 2009
Labels: in the news Comments: (26)